Bulgari's Giardini Italiani High Jewellery Collection: Renaissance Revival - HIGH JEWELLERY DREAM
ဘ‌‌လော့ခ် Bvlgari ခေတ်ပြိုင်အပိုင်းပိုင်း ထူးခြားသောရတနာ အမြင့်ရတနာ စိတ်ဝင်စားခြင်း
Bulgari ၏ Giardini Italiani အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း - Renaissance Revival
Bulgari ၏ရတနာသစ်များကိုစုဆောင်း Giardini အီတလီ: ပန်းခြံဥယျာဉ်ပန်းချီကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောထူးခြားသောဖန်တီးမှု ၁၀၀ ကျော်သည်အီတလီ Renaissance တွင်တိုးတက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ grandiose အီတလီဥယျာဉ်၏အနုပညာ စဉ်အတွင်းထွန်းကား RenaissanceMichelangelo နှင့် Raffaello စသည့်ဗိသုကာများ၊ ပန်းချီဆရာများနှင့်ပန်းပုဆရာများသည်လူသားတို့အမွေရခဲ့သောရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုကိုအဓိပ္ပာယ်အသစ် ပေး၍ လှပသောလက္ခဏာများကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်ပုံသဏ္ingာန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သဘာဝနှင့်အနုပညာအသစ်တစ်ခုစိတ်ကူး။
Palazzis နှင့် Villas အမျိုးမျိုး၏ဥယျာဉ်များ၌သဘာဝသည်သဘာဝနှင့်အလွန်နက်ရှိုင်းသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် - ဗာတီကန်ရှိ Belvedere မှ Tivoli ရှိ Villa d'Este အထိ၊ Bagnaia ရှိ Villa Lante မှ Florence ရှိ Boboli ဥယျာဉ်သို့ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ဗိသုကာပညာရှင်များသွားခဲ့သည်။ သဘာဝအလျောက်တုပထားသည့်အပြင်၎င်း၏ပုံသဏ္resာန်ကိုပြန်လည်ပုံသွင်းရန်၊ ပုံစံတစ်ခုပေးရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်လူ၏အလုပ်သို့အသွင်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။
အီတလီဥယျာဉ်သည်သဘာဝကို အသုံးချ၍ အရောင်ခြယ်သည့်အရောင်ခြယ်သသည့်အရောင်များကိုအသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်စကျင်ကျောက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုအသုံးပြုသည်။ သဟဇာတဂျီသြမေတြီဖွဲ့စည်းထားသောခြံစည်းရိုးများသည်စင်ကြယ်သောပုံစံများကြောင့်မျက်စိကိုနှစ်သက်သည်။ စမ်းချောင်းများမှတောက်ပစွာစီးဆင်းနေသောရေနှင့်အာရုံများကိုဖမ်းယူနိုင်ခြင်း၊ ပန်းပုများကဲ့သို့ခုတ်လှဲထားသည့်အမြဲစိမ်းသစ်ပင်များကိုတောက်ပသောအပြောင်းအလဲ၊ ပျက်စီးလွယ်သောအစွမ်းထက်သောပန်းများ၊ ရုပ်ထုများ၊ ဂူများ၊ ရေနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေသောရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ပွဲတော်များ၊
အကျော်ကြားဆုံး Renaissance ဗိသုကာလိုပဲ Bulgari သည်သဘာဝကိုပုံတူမျိုးပွားရန်စံပြအဖြစ်မသတ်မှတ်သော်လည်းအကြီးမားဆုံးအနုပညာ၏အထွတ်အထိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သဘာဝတရားသည်လှုံ့ဆော်မှုစွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်ပြီးလှပမှု၏မူလအစဖြစ်သည်။ သဘာဝတရားသည်အနုပညာလက်ရာတွင်အရသာခံပြီးလေးစားမှုရှိရန်လိုအပ်သောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအဖြစ်အဖိုးတန်ဆုံးဖြစ်သည်။
အစကတည်းက Bulgari ၏ရတနာများနှင့်လက်ပတ်နာရီများသည်အနုပညာနှင့်သဘာဝအကြားမပြတ်မတည့်ဆွေးနွေးမှုများမှမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ သဘာဝကိုအဖိုးတန်သတ္တုများနှင့်ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ လှပမှုနှင့်အကန့်အသတ်များဖြင့်တွေ့နိုင်သည်။ ဒီဇိုင်နာများ၊ ကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်ပန်းထိမ်သမားများလက်ရာ၌နေထိုင်သောအနုပညာ။
Bulgari ၏ရတနာအသစ်များစုဆောင်းခြင်း၊ ဥယျာဉ်များ Italiani, အမှန်ပင်တစ်ခုဖြစ်သည် ensemble Bulgari ၏ဒီဇိုင်နာများနှင့်လက်မှုပညာရှင်များ၏သန့်ရှင်းသောလက်မှုလက်ရာကြောင့်အနုပညာ၏နေရာအနှံ့အပြားမှရှာဖွေနိုင်သောဒြပ်စင်များတွေ့ရှိနိုင်သောအံ့မခန်းဖွယ်ရတနာများ။: ခြံစည်းရိုးများနှင့်ပန်းပွင့်များ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောဂျီသြမေတြီ (S) တွင်အသက်ဝင်လာသည်parkling နှလုံး ဖန်စီဖြတ်ထားသောစိန်များသည်ပြန်လည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတွင်းပိုင်းတွင်အချစ်ဇာတ်လမ်းများထည့်သွင်းထားသည့်လည်ဆွဲ အချိန်ဂျီသြမေတြီ နာရီ။
sparkling နှလုံးလည်ဆွဲ။ Bulgari, Giardini Italiani အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
အချိန်နာရီ၏ဂျီသြမေတြီ။ Bulgari, Giardini Italiani အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
စမ်းရေတွင်းများ '' တောက်ပ, ထိုအတွက် twinkles ရေဆငျဖိုနီ'' s ကို ထူးခြားသောနီလာနှစ်ခုသို့မဟုတ်ယင်းကထွန်းလင်းသည် မှော်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု ' စိန်နှင့်၎င်းသည် ၁၂၅ ကာရက်ရှိနီလာမှတဆင့်ပြည့်စုံသောပုံရိပ်ကိုဖော်ပြသည် အချစ်၏ပရဒိသု.
ချမှတ်ခြင်းအတွက်ရေဆငျဖိုနီလည်ဆွဲ။ Bulgari, Giardini Italiani အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
မှော်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုလည်ဆွဲ။ Bulgari, Giardini Italiani အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
အချစ်ရဲ့ပရဒိသု gouache ။ Bulgari, Giardini Italiani အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
အဆိုပါပန်းပွင့် '' ရငျးနှီးခြင်းနှင့်တက်ကြွကဗျာ, အတွက်ပဲ့တင်သံ နွေ ဦး ရာသီ နှင့်အလွန်ခေတ်မီသော (Botticelli တစ်ခုကိုးကွယ်) လျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်။ ထူးခြားသောနီလာနီလာခုနစ်လုံးတွင်ညင်ညင်သာသာတွေ့ရှိရသောပွဲတော်များသည်အဖိုးတန်သောအလင်းဖြစ်သည် အပြာရောင် Iridescence.
နွေ ဦး ရာသီကြုံတွေ့ရလည်ဆွဲ။ Bulgari, Giardini Italiani အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
လျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်လည်ဆွဲ၏အသေးစိတျ။ Bulgari, Giardini Italiani အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
Bulgari ၏အပြာရောင် Iridescence လည်ဆွဲ၏ပုံကြမ်း။ Giardini Italiani အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
Bulgari ၏ရတနာအသစ်များစုဆောင်းခြင်း၊ Giardini အီတလီ, ကျောက်မျက်နှင့်အဖိုးတန်သတ္တုများ၏သှငျပွောငျးသှားအလှတရားကန့်သတ်မရှိနှင့်ပစ္စည်းစင်ကြယ်သောပုံစံ, အလင်းနှင့်ကာမဂုဏ်သည်အဘယ်မှာရှိထူးခြားသောရတနာဖန်တီးမှုသို့အသွင်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ CC
ကလောဒီယာကလက်တီတီမှတည်းဖြတ်သည်။ အချိန်မှတဆင့်ရတနာ။ အားလုံးပစ္စည်းယဉ်ကျေး Bulgari စာနယ်ဇင်းရုံး။
Tags:အတတ်ပညာ • bulgari • လက်မှုပညာ • ဥယျာဉ်တော် • GiardiniItaliani • ဟဲဟဲ • ဟဲလို • လက်ရာ • သဘာဝ • ခေတ်ဆန်း
မှတ်ချက်0ခုBulgari ၏ Giardini Italiani အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း - Renaissance Revival"